Ny sidina tsy mijanona any Chicago mankany Athens: Inona no andrasantsika?
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny sidina tsy mijanona any Chicago mankany Athens: Inona no andrasantsika?
Greek- Amerikana George Andritsakis dia tia Gresy ary tia fizahan-tany. Tsy maintsy tian'ny George ny sidina tsy miato avy any Chicago mankany Athens, ary mandeha amin'ny fomba tsy manam-paharoa handresy lahatra ireo kaompaniam-pitaterana izy hanatanterahana izany.
United Airlines, American Airlines, IATA, US Department of Transportation, FAA, ASTA, the Federation of Hellenic Associations of Travel and Tourist Agencies ary ny Greek National Tourism Organisations dia voatonona ao amin'ny fanangonan-tsonia iray nataon'i George Andritsakis izay araka ny kaonty media sosialy dia masoivoho zokiolona mpivahiny ao amin'ny AAA.
Ny fanangonan-tsonia dia ny hampahafantatra ireo vatana sy orinasa voalaza etsy ambony fa ilaina ny serivisy vaovao tsy an-kijanona eo anelanelan'ny Athens, Greece ary ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena O'Hare any Chicago, indrindra mandritra ny fahavaratra.
Raha ny fijoroana ankehitriny, ny serivisy tsy an-kijanona eo anelanelan'i Amerika Avaratra sy Gresy dia navela tany amin'ny seranam-piaramanidina John F. Kennedy International any New York, seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Liberty any Newark, seranam-piaramanidina iraisampirenena any Philadelphia, seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Pearson any Montreal, seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Pierre-Elliott Trudeau any Montreal. ny ankamaroany dia misy serivisy fizaran-taona sy fahavaratra fotsiny (tsy manisa ny serivisy mandritra ny herintaona mankany New York sy Athens ho fanampiana ny iray amin'ireo sidina Athens-Dubai.)
Hoy i George tao amin'ny fanangonan-tsonia nataony: “Tsy isalasalana fa ny fandalinana sy ny famakafakana ny zotra dia natao tao amin'ny United Airlines sy American Airlines momba ny fanompoana tany Athens taloha. Ankehitriny miaraka amin'ny fahatongavan'ireo fiaramanidina toy ny Airbus A350 sy Boeing 787, na ny Airbus A330 aza, ny serivisy avy any Chicago ka hatrany Athens dia azo ampiasaina tsara, na dia amin'ny fahavaratra fotsiny aza. Ankoatr'izay, ny safidy afovoany-kaontinanta dia ahafahana manana fifandraisana bebe kokoa sy mora kokoa amin'ny ivon-toeran'ny United sy Amerikana any O'Hare Airport. Betsaka ny tanàna any amin'ny morontsiraka andrefana sy ny tandrefana any an-tendrombohitra izay mahazo tombony lehibe amin'ny fifamatorana mora kokoa mamakivaky an'i Chicago fa tsy mamaky an'i New York, Newark na Philadelphia. "
"Miangavy ny zotram-piaramanidina sy ny vondrona fizahan-tany, fizahan-tany ary zotram-piaramanidina samy hafa aho mba hijery akaiky an'io raharaha io ary hamily ny baolina.
Cathy Gorfis avy any Orland Park, IL no mijoro ao ambadik'ity fanangonan-tsonia ity ary maneho hevitra:
“I Chicago no manana ny seranam-piaramanidina be olona indrindra eran'izao tontolo izao ary misy fifandraisana maro be mankany Athens, Gresy. Horaisiny tokoa ireo mpandeha amin'ny alàlan'ny fanomezana sidina mivantana mankany Atena… inona no andrasantsika ??? ”
kitiho eto hijery ny fanangonan-tsonia.